WordPress hacked? Nzọụkwụ iri iji mezie Blog gị | Martech Zone
A ezigbo enyi m na nso nso nwetara ya WordPress blog hacked. Ọ bụ ajọ mbuso agha nwere ike inwe mmetụta na ogo ọchụchọ ya yana, n'ezie, ike ya n'okporo ụzọ. Ọ bụ otu n'ime ihe mere m ji enye nnukwu ụlọ ọrụ ndụmọdụ ka ha jiri usoro ịde blọgụ ụlọ ọrụ dịka Ngwakọta - ebe enwere ndi nlekota na acho gi. (Nkwupụta: Abụ m onye na-eketa oke)
Ndị ụlọ ọrụ anaghị aghọta ihe kpatara ha ga-eji kwụọ ụgwọ maka ikpo okwu dị ka Compendium… ruo mgbe ha ga-ewe m n'ọrụ ka m rụọ ọrụ abalị niile iji rụzie ha free Blọọgụ blog! (FYI: WordPress na-enyekwa a Versiondị VIP na Typepad na-enyekwa a ụdị azụmahịa. )
Maka ndị gị na enweghị ike ị nweta usoro ịde blọgụ na ọrụ ha na-enye, nke a bụ ndụmọdụ m maka ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na hacked WordPress:
Nọrọ jụụ! Amalitela ihichapụ ihe na ịwụnye ụdị ihe nzuzu niile na-ekwe nkwa idozi nrụnye gị. Don't maghị onye dere ya na ma ọ bụ na ọ na-agbakwunye ihe nzuzu karịa na blọgụ gị. Were ume miri emi, lelee blog a, na nwayọ na ụma gbadaa na ndenye ndenye.
Were ala. Ozugbo. Zọ kachasị mfe iji mee nke a na WordPress bụ nyegharịa faịlụ index.php gị na ndekọ mgbọrọgwụ gị. O zughi iji tinye index.html peeji nke… ịkwesịrị ịkwụsị okporo ụzọ niile na ibe ọ bụla nke blọọgụ gị. Na ntinye nke ibe index.php gị, bulite faịlụ ederede nke na-ekwu na ịnọghị n'ịntanetị maka mmezi ma ga-alọghachi n'oge na-adịghị anya. Ihe mere i kwesiri iwepu blọọgụ bụ n'ihi na ọtụtụ n'ime ndị a hacks na-adịghị aka, ha na-eme site na obi ọjọọ scripts na itinye onwe ha ọ bụla writeable faịlụ gị nwụnye. Onye na-eleta ibe dị na blọọgụ gị nwere ike ịmegharị faịlụ ndị ị na-arụ ọrụ ịrụzi.
Weghachite blog gị. Emekwala nkwado faịlụ gị, dokwaa nchekwa data gị. Chekwaa ya ebe pụrụ iche na ihe omume ịchọrọ iji zoo aka na ụfọdụ faịlị ma ọ bụ ozi.
Wepu gburugburu niile. Gburugburu bụ ụzọ dị mfe maka onye hacker iji dee ma tinye koodu n'ime blog gị. A na-edekwa ọtụtụ isiokwu na-adịghị mma site n'aka ndị na-emepụta nghọta na-adịghị aghọta nuances nke ịchekwa ibe gị, koodu gị, ma ọ bụ nchekwa data gị.
Wepu niile plugins. Ngwa mgbakwunye bụ ụzọ kachasị mfe maka hacker iji dee ma tinye koodu n'ime blog gị. Edere ọtụtụ plugins nke ọma site na ndị mmepe mbanye anataghị ikike nuances nke ịchekwa ibe gị, koodu gị, ma ọ bụ nchekwa data gị. Ozugbo hacker hụrụ faịlụ nwere ọnụ ụzọ ámá, ha na-ekenye ndị ọrụ ntanetị na-achọ saịtị ndị ọzọ maka faịlụ ndị ahụ.
Weghachi WordPress. Mgbe m kwuru wughachi WordPress, m na-ekwu ya - tinyere isiokwu gị. Echefula wp-config.php, faịlị anaghị edegharị mgbe ị depụtaghachiri na WordPress. Na blog a, achọpụtara m na ederede ederede ọjọọ na Base 64 yabụ ọ dị ka ngọngọ nke ederede ma tinye ya na nkụnye eji isi mee nke ibe ọ bụla, gụnyere wp-config.php.
Nyochaa ebe nchekwa data gị. You'll ga-achọ inyocha okpokoro nhọrọ gị na okpokoro tebụl gị ọkachasị - na-achọ ederede ma ọ bụ ọdịnaya dị na mpụga ọ bụla. Ọ bụrụ na ị nwetụbeghị elele data gị anya, dịrị njikere ịchọta PHPMyAdmin ma ọ bụ njikwa njikwa nchekwa data ọzọ n'ime ngalaba njikwa gị. Ọ bụghị ihe ọchị - mana ọ dị mkpa.
Mbido WordPress na isiokwu ndabara na enweghị mgbakwunye arụnyere. Ọ bụrụ na ọdịnaya gị pụtara ma ị hụghị rediregharị ọ bụla akpaka na saịtị ọjọọ, ị nwere ike ịdị mma. Ọ bụrụ na ị nweta redirect na saịtị ọjọọ, ị ga-achọ ikpochapụ oghere gị iji hụ na ị na-arụ ọrụ site na akwụkwọ kachasị ọhụrụ nke ibe ahụ. Nwere ike ịgafe ndekọ ndekọ data gị site na ndekọ iji gbalịa ịchọta ọdịnaya ọ bụla nwere ike ịdị ebe ahụ nke na-abanye ụzọ na blọgụ gị. Ohere inweta bu nchekwa data gi di ocha… mana imaghi!
Wụnye Okwu Gị. Ọ bụrụ na emegharịrị koodu ọjọọ ahụ, ọ ga-abụrịrị na ịnwe isiokwu oria. Nwere ike ịga n’ahịrị n’ahịrị site n’isiokwu gị iji hụ na enweghị koodu ọjọọ ọ bụla. Ọ ga-aka mma ma ị malite ịmalite ọhụrụ. Mepee blọọgụ ruo post ma hụ ma ị ka bu ọrịa ahụ.
Wụnye ngwa mgbakwunye gị. Nwere ike iji ngwa mgbakwunye, nke mbụ, dị ka Nhọrọ Dị Ọcha mbụ, wepu nhọrọ ọ bụla ọzọ na plugins ị na-anaghịzi eji ma ọ bụ chọrọ. Ejula nzuzu, ngwa mgbakwunye a abụghị nke kacha mma… ọ na - egosiputa ma na - enye gị ohere ihichapụ ntọala ịchọrọ ịrapara na. Budata ngwa mgbakwunye gị niile na WordPress. Gbaa blog gị ọzọ!
Ọ bụrụ n’ịhụta na esemokwu a laghachitere, ohere nwere ike ịbụ na ị deghachiri ngwa mgbakwunye ma ọ bụ isiokwu nke na-adịghị ike. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ apụtaghị, ị nwere ike gbalịrị ịme ụzọ mkpirisi di na nwunye iji dozie nsogbu ndị a. Ejila ụzọ mkpirisi.
Ndị a hackers bụ mkpari folks! Understandingghọtaghị ngwa mgbakwunye ọ bụla na faịlụ isiokwu na-etinye anyị niile n'ihe egwu, ya mere kpachara anya. Wụnye plugins nwere oke ọkwa, ọtụtụ nrụnye, yana nnukwu ndekọ nke nbudata. Guo ihe ndi mmadu kwuru na ha.
Tags: idozi wordpresshackedndozi wordpresswordpress hacked
Daalụ maka ndụmọdụ ị kwuru ebe a. Achọrọ m ịjụ ihe ma ọ bụrụ na hacker dị nnọọ gbanwere paswọọdụ gị na saịtị. Nweghị ike ijikọ folda wordpress site na FTP.
Enweela m nke a tupu oge a. Easiestzọ kachasị mfe iji mee ya bụ imeghe ebe nchekwa data ma dezie adreesị ozi-e nlekọta gị. Gbanwee adreesị ozi-e azụ na adreesị gị wee megharịa ntọala paswọọdụ. A ga-eziga ndọtị ha na adreesị email gị karịa ndị na-agba ọsọ - mgbe ahụ ị nwere ike ịkpọchi ha maka ihe ọma.
Ezi ihe. Ihe a mere otu enyi m n’oge na-adịbeghị anya. Ọ gaara eji ndụmọdụ gị.
Doug, ị mere nchọpụta nke ngwa mgbakwunye eji gbajie?
Enwetara m blog gị ebe m na-achọ idozi nsogbu m na saịtị m. Saịtị m - http://www.namaskarkolkata.com. na mberede taa ụtụtụ achọpụtara m na saịtị m Palestine Hacker - !! HacKed Site T3eS !! . biko ị nwere ike ile anya - otu m ga esi edozi ya. Ha gbanwere aha njirimara WordPress na paswọọdụ m yana ka m na-agbake ịgbake site na email m - ọ gafeela. Enwere m mmetụta na-enweghị enyemaka. Biko duzie m.
Enwere ụzọ dị mfe iji weghachite njikwa. Iji usoro ihe omume dị ka phpMyAdmin nke arụnyere na ọtụtụ saịtị, ị nwere ike ịga na wp_users okpokoro ma gbanwee adreesị ozi-e nke ndị nlekọta gị. Kedu oge ị nwere ike ịme 'echefuru paswọọdụ' na ihuenyo nbanye wee tọgharịa paswọọdụ.
Ọrụ Site Home 4 Ndụ
Ndewo Doug - ekele maka ndozi a ngwa ngwa… ọ bụrụ na m maara banyere ya izu 2 gara aga mgbe otu saịtị m nwetara hacked support Bochum nkwado na-esote abaghị uru na m ga-ekpochapụ saịtị ahụ niile ma bido ọzọ! Ekele gị Agaghị m agabiga ihe mgbu ahụ ọzọ na saịtị m kachasị ọhụrụ nke hacked. Aro ọ bụla maka nchekwa hacker? - jiri ekele, Dee
Ndewo Dee - enwere ụfọdụ plugins n’ebe ahụ na - egbochi ndozi ọ bụla na faịlụ isiokwu gị. WordPress Firewall 2 bụ otu n'ime ha. Ọ gaghị emelite faịlụ isiokwu na-enweghị inye ikike. Ọ bụ ntakịrị ihe mgbu nye nwa okorobịa dị ka m bụ onye na - 'tweaking' mgbe niile, mana ọ nwere ike bụrụ nnukwu ngwa mgbakwunye maka onye na-achọghị itinye ihe ọ bụla ma ọ bụ edemede ọ bụla na-abanye ebe ahụ ma na-egwu saịtị gị!
LA ihe ọiceụ .ụ
Sep 19, 2011 na 10:30 PM
Ndewo ebe ahụ, daalụ maka post gị. Ejiri saịtị m, ma ihe niile merenụ bụ na ha agbakwunyere ndị ọrụ WP ma tinye posts atọ blog. Onye na-elekọta weebụ m na-eche na ọ bụ naanị "bot" na-emebi iwu WP m, mana enwere m obere ụjọ. Agbanwere m okwuntughe m niile, gbakwunye nchedo paswọọdụ n'okpuru nchịkọta akụkọ .htaccess, kwadoro faịlụ WP m, ntọala isiokwu m na ọdụ data m ma tinye saịtị ahụ n'okpuru mmezi- Ihe niile na nkwadebe iji wụnye WP na isiokwu m. N'agbanyeghị nke a, nke a bụ ihe siri ike maka ọhụụ. M a bit mgbagwoju anya na-esi ọcha reinstall WP na m isiokwu- nke mere na ọ dịghị ochie faịlụ na-anọgide na m ftp nkesa na-. Enwere m mgbagwoju anya banyere nyochaa ọdụ data m, na-ele tebụl m niile na phpMYadmin- Kedụ ka m ga-esi amata koodu ọjọọ? nke kacha enye m nsogbu bụ na m na-edezi ihe niile m na-etinye na WP ruo ụbọchị, kwa izu. Daalụ maka enyemaka ịkọwapụta ihe ndị a niile!
Sep 20, 2011 na 12: 19 AM
Imirikiti oge, ọ bụ faịlụ na wp-ọdịnaya nke a na-ejikarị. Faịlụ wp-config.php gị nwere nzere gị na folda wp-ọdịnaya gị nwere isiokwu gị na plugins. M ga-anwa ibudata WordPress ohuru wụnye na i copomi ihe niile mana wp-content ndekọ. Mgbe ahụ ị ga-achọ ịtọ nzere na faịlụ wp-config.php ọhụrụ (Agaghị m eji nke ochie). M ga-akpachapụ anya na-eji otu isiokwu na plugins… ma ọ bụrụ na otu n'ime ha hacked, ha nwere ike gbasaa esemokwu ha niile.
A na-edepụtasị koodu ọjọọ na faịlụ ọ bụla ma jiri okwu ndị dị ka eval ma ọ bụ base64_decode pt ha na-ezipụ koodu ahụ ma jiri ọrụ ndị ahụ wepụta ya.
Ozugbo saịtị gị kwadoro, ị nwekwara ike ịwụnye ngwa mgbakwunye nyocha nke ga-achọpụta ma ọ bụrụ na agbanwere faịlụ mgbọrọgwụ ọ bụla, dịka: http://wordpress.org/extend/plugins/wp-security-scan/
Sep 26, 2011 na 3:43 PM
Ndewo Doug! Echere m na m blog hacked. Enwere m ike ịchịkwa ya mana ọ bụrụ na achọrọ m ịkekọrịta post url na LinkedIn aha ngosipụta z z…. (ogwu ogwu) amaghi m ihe m g’eme ma obu idozi ya. M maa enweghá »‹ obi iru ala banyere na-ewere ala m dum blog… á »bá» huge nnukwu !!! Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na m wụnye ederede ọhụrụ na ndekọ ọzọ wee tinye isiokwu ahụ, nwalee ya ma nwalee plugins ahụ wee mezie ọdịnaya niile wee hichapụ ndekọ mbụ ahụ? Nke a ọ ga-arụ ọrụ? blọọgụ blọgụ m bụ Hispanic-marketing.com (ọ bụrụ na ịchọrọ ile anya ya) daalụ nke ukwuu !!!
Sep 26, 2011 na 3:52 PM
Ahụghị m ihe ọ bụla na-egosi na saịtị gị abanyela. Otutu mgbe etinyere saiti gi, a na emebi emebi isiokwu gi ka iwughachi WordPress n’ezie adighi enyere aka.
Feb 7, 2013 na 4:16 PM
WordPress VIP nwere ụdị nkwado a mana ọ bụ maka nnukwu ụlọ ọrụ. Ma ha nwekwara ngwaahịa akpọrọ VaultPress nke ahụ adịghị oke ọnụ ma nwee nkwado. Enweghị nkwado dịka teknụzụ "WordPress". Ndụmọdụ m ga-abụ ịnabata saịtị gị na WPEngine - https://martech.zone/wpe - ha nwere nkwado pụtara ìhè, akpaghị aka backups, nche nlekota, wdg Ha na-na na na ngwa ngwa! Anyị bụ ndị Mgbakwunye na anyị na saịtị ahụ na-kwadoro na ha!
Wayne Hatter kwuru
Feb 22, 2014 na 7:47 PM
Hey Douglas, ọ ga-amasị m ịgbakwunye na ndepụta gị dị ka # 11. Ikwesiri ịweghachi weebụsaịtị na ngwaọrụ Google Webmaster ka ha wee nwee ike ịghagharị ya ma nye ya ihe niile. Nke a na-ewekarị naanị awa 24 ugbu a, nke dị mkpụmkpụ karịa ka ọ dị na mbụ. N'ime ya were otu izu iji maliteghachi iri ari.